Dhamma Video - Browse Media - A
Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) - Most Recent
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / G - gar htar taw myar - ဂါထာတော်များ ဒိဝါတပတိ...
ဒိဝါတပတိ သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီး - အရှင်ဇ၀န
- မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)
http://yinthinnei.blogspot.com မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: ဒိဝါတပတိ သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီး အရှင်ဇ၀န မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) sahvha mingalar thet ba mingalar diwartetpati Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / Slideshows မေတ္တာရှင်...
မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) အရှင်ဇ၀န၏ သြ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ
Tags: မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) အရှင်ဇ၀န ၏ သြ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ သြ၀ါဒ ဆောင်ပုဒ် ဓမ္မဓာတ်ပုံ mettashin shwepyithar shwe pyi thar myit tar shin sayardaw sayartaw uzawana u zawana ashin zawana ashinzawana dhamma photo slideshow slide show allwarda all war da Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ယုံမှတ်လိ...
ယုံမှတ်လို့ပုံအပ်မိသူများအကြောင်း (၂) - မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)
Tags: မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ , mettashin shwe pyi thar , ashin zawana , U zawana , myittarshin , u za wa na , myit tar shin Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓဘာသာေ...
Tags: မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ , ဦးဇ၀န , အရှင်ဇ၀န ,mettashin shwepyithar , myittarshin , myit tar shin , uzawana , u za wa na , ashin zawana Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ / Slideshows Monk donates food at Insein...
Posted By: kovida
၂၅.၉.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် အရှင်ဇ၀န မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)
ဆရာတော် ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဦးပညာသီရိ၊ဦးကုသလ၊ဦးကောဝိဒ...
Tags: အင်းစိန်ထောင်အလှူ , Shwe Pyi Thar Sayardaw donates food prisoners Insein Jail , U za wa na , Mettashin Shwe Pyi Thar Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပင်လယ်ရေန...
http://yinthinnei.blogspot.com/ မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , ၀ံသာနု , မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) , အရှင်ဇ၀န , မေတ္တရှင် , သာသနာ့ပါလ , သာသနပါလ , U zawana , ashin zawana , mettashin zawana , myittarshin zawana , mettashin shwe pyi thar , myittarshin shwe pyi thar , sea and river Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] တရားနာနည်...
အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်) - တရားနာနည်း(၃)မျိုး တရားတော်
Tags: အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်) Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] လိုချင်လှ...
လိုချင်လျှင် ဆင်းရဲသည့်အရာ တရားတော်
Tags: အရှင်ဇဝန(မေတ္တာရှင်ဆရာတော်) Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဒုတိယအမြတ...
Tags: အရှင်ဇဝန(မေတ္တာရှင်ဆရာတော်) Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အတွင်းရန်...
Tags: အရှင်ဇဝန(မေတ္တာရှင်ဆရာတော်) Pages: 1234567 of 8